आज, म शरीरमा बास गर्दछु, र मैले गर्नुपर्ने काम आधिकारिक रूपमा गर्न थालेको छु। मानिसहरू मेरो आत्माको आवाजसँग डराए तापनि तिनीहरू मेरो आत्माको सार विरुद्धमा जान्छन्। मानव जातिका निम्ति मेरा वचनहरूमा मलाई देहमा चिन्नु कति गाह्रो छ भनी मैले विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नु आवश्यक छैन। मैले पहिले नै भनिसकेको छु, म मेरा आवश्यकताहरूमा कठोर भइरहेको छैनँ, र तिमीहरूले मेरो बारेमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नु आवश्यक छैन (किनकि मानिसहरूमा कमी छ; यो एक अन्तर्निहित अवस्था हो, र प्राप्त गरिने कुनै पनि अवस्थाले त्यो कमी पूरा गर्न सक्दैन)। तिमीहरूले केवल देहीय रूपमा मद्वारा जे गरिएका र भनिएका छन् ती मात्र जान्नुपर्छ। मेरा आवश्यकताहरू कठोर नभएकाले, म आशा गर्दछु तिमीहरूले यी सबै काम र वचनहरूको बारेमा जान्नेछौ, र उपलब्धि हासिल गर्नेछौ। तिमीहरूले यस फोहोरी संसारमा आफैलाई अशुद्धताहरूबाट मुक्त गर्नुपर्दछ, तिमीहरूले यो पछौटे “सम्राटहरूको परिवार” मा प्रगति गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ, र तिमीहरूले आफैलाई गम्भीर रूपमा नलिने कार्य कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। तँ आफैसित अलिकति पनि दयालु हुनुहुँदैन। मैले एक दिनमा भन्ने कुरा जान्नका निम्ति तैंले धेरै समय र कोसिस लगाउनुपर्दछ, र मद्वारा बोलिएको केबल एउटा वाक्यलाई अनुभव गर्न र त्यसबाट ज्ञान लिन पूरै जीवनभरको समय लाग्दछ। मैले बोल्ने वचनहरू अस्पष्ट र अमूर्त छैनन्; तिनीहरू खोक्रा कुराहरू होइनन्। धेरै जना मानिसहरू मेरो वचन प्राप्त गर्ने आशा गर्छन्, तर म तिनीहरूमा कुनै ध्यान दिँदिन; धेरै मानिसहरू मेरो सम्पत्तिका निम्ति तिर्खाउँछन्, तर म तिनीहरूलाई त्यो अलिकति पनि दिँदिनँ; धेरै मानिसहरू मेरो अनुहार हेर्ने इच्छा गर्छन्, तैपनि मैले यो सधैं लुकाएको छु; धेरै मानिसहरू ध्यानपूर्वक मेरो स्वर सुन्छन्, तर म मेरा आँखाहरू बन्द गर्दछु र मेरो शिर पछिल्तिर झुकाउँछु, तिनीहरूको “लालसा” द्वारा प्रभावित हुँदिनँ; धेरै मानिसहरू मेरो स्वरको आवाजसँग डराउँछन्, तर मेरा वचनहरू सधैं आक्रामक नै हुन्छन्; धेरै मानिसहरू मेरो अनुहार देखेर डराउँछन्, तर म जानाजानी तिनीहरूलाई प्रहार गर्न त्यस्तो देखिन्छु। मानिसहरूले मेरो अनुहार वास्तविक रूपमा कहिल्यै देखेका छैनन्, नत तिनीहरूले साँच्चै नै मेरो स्वर नै सुनेका छन्; किनभने तिनीहरूले मलाई साँचो रूपले चिन्दैनन्। तिनीहरू मद्वारा प्रहार गरी ढालिए पनि, तिनीहरूले मलाई छोडे पनि, र तिनीहरू मेरो हातद्वारा दण्डित भए पनि, तिनीहरू अझै पनि तिनीहरूले गर्ने सबै कुरा साँच्चै नै मेरो हृदय अनुरूप छन् वा छैनन् भनी जान्दैनन् र मैले मेरो हृदय वास्तवमा कसलाई प्रकट गर्दछु भन्ने कुरामा अनजान हुन्छन्। संसारको सृष्टि भएदेखि नै, कसैले पनि मलाई साँचो रूपले जानेको वा देखेको छैन, अनि आज म एक देहीय बनेको भए पनि तिमीहरूले मलाई अझै चिन्दैनौ। के यो सत्य तथ्य होइन र? के तैंले कहिल्यै शरीरमा मेरा कार्य र स्वभाव थोरै मात्र भए पनि देखेको छस्?
स्वर्गमा, जहाँ म ढल्कन्छु, र स्वर्गको मुनि, जहाँ म आराम पाउँछु। मैले कहीं त बस्नुपर्छ, र मसित कुनै समय त हुन्छ जुनबेला मैले मेरो शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ। यदि म पृथ्वीमा नभएको भए, यदि मैले आफैलाई देहमा नलुकाएको भए, र यदि म नम्र र लुकेको नभए, के स्वर्ग र पृथ्वी धेरै पहिले नै परिवर्तन भइसकेको हुने थिएन र? के तिमीहरू, मेरा मानिसहरू, मद्वारा पहिले नै प्रयोग गरिएको हुने थिएनौ र? तापनि, मेरा कामहरूमा बुद्धि हुन्छ, र मैले मानिसको कपटताको बारेमा पूर्ण रूपले जाने पनि, म तिनीहरूको उदाहरण अनुसरण गर्दिनँ, बरु त्यसको बदलामा तिनीहरूलाई केही कुरा दिन्छु। आत्मिक क्षेत्रमा मेरो बुद्धिको असमाप्य छ, र देहमा मेरो बुद्धि अनन्त छ। के यो त्यही क्षण होइन जुन बेला मेरा कामहरू स्पष्ट पारिन्छन्? मैले आजको दिनसम्म, राज्यको युगमा मानिसहरूलाई धेरैचोटि माफ र क्षमा गरेको छु। के मैले मेरो समयलाई साँच्चै नै अझ ढिलो गर्न सक्छु? कमजोर मानिसहरूप्रति केही बढी दयालु भएको भए पनि एक पल्ट मेरो काम पूरा भएपछि के मैले अझै पुरानै काम गरेर म आफैमाथि कठिनाइ ल्याउन सक्छु र? के मैले जानाजानी शैतानलाई ममाथि दोष लगाउन दिन्छु र? मलाई केही गर्नका निम्ति मानिसहरू चाहिँदैन, बरु मैत त केबल मेरा वचनहरूको वास्तविकता र तिनको मूल अर्थलाई स्वीकार गरे पुग्छ। मेरा वचनहरू सरल भए पनि, सारमा ती जटिल छन्, किनकि तिमीहरू अति साना छौ, र अति बोधो बनेका छौ। जब म मेरा रहस्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट गर्दछु र देहमा मेरो इच्छा स्पष्ट गर्दछु, तर तिमीहरूले देख्दैनौ; तिमीहरूले आवाज सुन्छौ, तर तिनीहरूको अर्थ बुझ्दैनौ। म दुःखमा परेको छु। म देहमा भएको भए तापनि, म देहको सेवाको काम गर्न असमर्थ छु।
मेरा वचनहरू र व्यवहारहरूबाट देहमा गरिएका मेरा कामहरू कसले जान्न सकेको छ र? जब म मेरा रहस्यहरू लिखित रूपमा प्रकट गर्छु, वा ठूलो स्वरमा तिनलाई बोल्छु, सबै मानिसहरू अचम्मित भएर बोल्नै सक्दैनन्; तिनीहरू चुपचाप आफ्ना आँखा बन्द गर्छन्। मैले भन्ने कुराहरू मानिसहरूलाई किन बुझ्न नसकिने छन्? मेरा वचनहरू तिनीहरूका निम्ति किन त्यति विघ्न बुझ्न नसकिने छन्? मेरा कामहरूप्रति तिनीहरू किन त्यति अन्धो छन्? को चाहिँ मलाई देख्न र कहिल्यै नभुल्न सक्षम छ? तिनीहरूमध्ये को-को चाहिँ मेरो आवाज सुन्न र त्यसलाई त्यसै जान नदिन सक्षम छन्? को मेरो इच्छालाई बुझ्न र मेरो हृदयलाई खुशी पार्न सक्षम छ? म मानिसहरूको माझमा बस्दछु र उनीहरूमाझ घुमफिर गर्दछु; मैले तिनीहरूको जीवनको अनुभव गरेको छु—मैले मानवताका निम्ति सृष्टि गरेपछि सबै कुरा राम्रै रहेको महसुस गरे पनि, मैले मानिसहरूमाझको जीवनबाट कुनै आनन्द पाउँदिनँ, र तिनीहरूमाझको खुसीद्वारा म कुनै आनन्द पाउँदिनँ। म तिनीहरूलाई घृणा र अस्वीकार गर्दिनँ, न त तिनीहरूप्रति म भावुक नै छु—मानिसहरूले मलाई नचिनेकाले, अन्धकारमा मेरो अनुहार देख्न तिनीहरूलाई कठिन हुन्छ; होहल्लाहरूको बीचमा, तिनीहरूलाई मेरो आवाज सुन्न गाह्रो भएको भएको छ र मैले जे भन्छु त्यो बुझ्न तिनीहरू असमर्थ भएका छन्। यसैले, बाहिरी रूपमा, तिमीहरूले गर्ने सबै कुरा मप्रतिको समर्पण हो, तर तिमीहरूको हृदयमा, अझै पनि तिमीहरूले मेरो अवज्ञा गर्छौ। यो भन्न सकिन्छ कि मानव जातिको पुरानो स्वभावको सम्पूर्णता नै यस्तै छ। यसमा को अपवाद छ? को मेरो दण्डको पात्र छैन? तापनि, को मेरो सहनशीलताअन्तर्गत जिउँदैन? यदि मानव जाति सबै मेरो क्रोधले नष्ट हुन्थ्यो भने, मैले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुको महत्त्व के हुनेछ? मैले एकचोटि धेरै मानिसलाई चेतावनी दिएँ, धेरै मानिसहरूलाई प्रोत्साहन दिएँ, र धेरैलाई खुल्लमखुल्ला दण्ड दिएँ—के यो मानवजातिलाई सिधै नाश गर्नुभन्दा उत्तम होइन र? मेरो उद्देश्य मानिसहरूलाई मार्नु होइन, बरु मेरा दण्डहरूको बीचमा पनि तिनीहरूलाई मेरा कार्यहरूको बारेमा जान्न लगाउनु हो। जब तिनीहरू अतल कुण्डबाट माथि आउँछौं—भन्नुको अर्थ, जब तिमीहरूले मेरो दण्डबाट आफूलाई मुक्त गर्छौ—तिमीहरूको व्यक्तिगत विचार र योजनाहरू सबै हराउनेछन्, र सबैले मलाई सन्तुष्ट पार्ने इच्छा गर्नेछन्। यसमा, के मैले मेरो लक्ष्य प्राप्त गरेको हुँदिनँ र?